Ziziphi iimpawu zamatye ezibonakalayo? I-Optical Illusions ngamatye
Iimpawu zeGemstones ezibonakalayo
Iimpawu ze-Gemstones ezibonakalayo ziphumo ezivela kwindlela ukukhanya kudibanisa ngayo nesakhiwo sekrisitini sesigxina. Ukusebenzisana okanye ukuphazamiseka kungaba ngendlela yokusabalalisa ukukhanya, ukucamngca, ukuchithwa, ukuchithwa, ukuchithwa okanye ukuhanjiswa.
I-Adularescence yinto eluhlaza okwesibhakabhaka ebonakalisa umphezulu wecabochon kumphezulu weMoonstone. I-phenomenon ye-shimmer ivela ekusebenzisaneni kokukhanya kunye nocingo lweekristali ezincinci ze "albite" kumatye enyanga. Ubungakanani boluhlu lwezi kristali zincinci zichonga umgangatho we-blue shimmer. Ukucoca umaleko, kubhetele ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Oku kuhlala kubonakala njengokukhanya kokukhanya. I-Moonstone yi-orthoclase feldspars, elinye igama "selenite". AmaRoma ayibiza ngokuba yiAstrion.
Abaqhibi be-Gem bavame ukukhetha ukusika imibobo ye-cabochon, xa amatye ephantsi. Kwizinto ezinje kunye namatye xa ukukhanya kuwela kwi-cabochon surface kwaye kwenza imibala enjengeenkwenkwezi, loo nto ibizwa ngokuba yi-asterism. Kukho i-4 ray kunye neenkwenkwezi ze-6 eziqhelekileyo zijonge ngokuqhelekileyo. Oku kwenzekayo xa ukuqhelaniswa kwentsalane kufana ne-inclusions okanye isilikhi ngaphakathi kwekristal ikhona kwi-axis enye.
Ukusuka kwigama lesiFrentshi "Ingxoxo" kuthetha ikati. Ukuncokola kubhekisa kwinto efana nokuvula kunye nokuvala iliso lekati. Singajonga kwiliso lekati leChrysoberyl ngokucacileyo okukhulu. Iigugu zeliso lekati zinebhendi enye ebukhali, ngamanye amaxesha amabini okanye amathathu amabhanti, abaleka enqumla kumhlaba wecabochon Amatye eempawu zekati ezikwimo ye-cabochon zinqunyanyisiwe zencoko. Iinaliti ezichanekileyo zekristale yolwakhiwo lwelitye zihambelana ngqo neziganeko. Ke xa ukukhanya kuwela kuyo, ibhanti ebukhali iyabonakala. Kwiimeko ezilungileyo, iikati zekrissoberyl ezincokolayo ngokubonakalayo zahlula umphezulu ube ziqingatha ezibini. Sibona ubisi kunye nobusi xa ilitye lihamba phantsi kokukhanya.
I-Iridescence yaziwa nangokuthi i-goniochromism, into ephezulu apho ububanzi bezinto ezibonakalayo bubonisa imibala emininzi njengendlela yokujonga utshintsho. Iyakwazi ukubonakala lula entanyeni yehobe, i-soap bubbles, amaphiko eflyflyfly, unina weeparele njl. Ukungahambi kahle kweendawo eziphezulu kunye nezikhulu ezivumela ukuba ukukhanya kudlule kwaye kubonakalise ukubuya kwiindawo ezininzi (i-diffraction) ebangela umbala we-multi-color umboniso. Ukudibana nokuphazamiseka, isiphumo siyamangalisa. Iiparele zendalo zibonisa i-iridescence ehluke kakhulu kumbala womzimba wayo. Amaparele aseTahiti abonisa ukukhanya okukhulu.
Igugu elimangalisayo elibizwa ngokuba yi-opal libonisa umbala omhle. Iimpawu zomlilo ezivela kwi-Lightening Ridge, e-Australia (zibonisa ukutshintsha kwemibala ekhanyayo emibala emnyama kumnyama) zidume ngale nto. Ngelixa lo mdlalo wombala luhlobo lwe-iridescence, phantse bonke abathengisi bamatye abiza ngokungalunganga "umlilo". Umlilo ligama lejografi, Kukusasazeka kokukhanya kubonakalisa kumatye anqabileyo. Iyabonakala kwidayimane. Kukusasazeka okulula kokukhanya. Kwimeko ye-opals ayisiyiyo ukusasazeka kwaye ke, kuyashukuma ukusebenzisa igama "umlilo".
Owona mzekelo mhle wotshintsho lombala yi-alexandrite. Ezi zixhobo kunye namatye avela ahluke kakhulu ekukhanyeni kwe-incandescent xa kuthelekiswa nokukhanya kwemini yendalo. Oku ikakhulu kungenxa yokwakheka kweekhemikhali zexabiso kunye nokufunxwa okukhethiweyo. I-alexandrite ibonakala iluhlaza emini kwaye ikwabonakala bomvu ngokukhanya kwe-incandescent. I-sapphire, kunye ne-tourmaline, i-alexandrite kunye namanye amatye anokubonisa utshintsho lombala.
I-Labradorescence luhlobo lwe-iridescence, kodwa lukhokela kakhulu ngenxa yee-twinning crystal. Singayifumana kwisiqwenga se-labradorite.